Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Vonjeo ny antsantsantsika
Vaovao Mafana • Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao Mafana Thailand
dia manohy mandroso ny fandaharam-potoana momba ny fiarovana an-dranomasina miaraka amin'ny fanombohana ny fiaraha-miasa vaovao lehibe miaraka amin'ny Phuket Marine Biological Center (PMBC) mba hiompy, hikarakara ary hamotsorana antsantsa volotsangana any atsimon'i Thailand.
Dirk De Cuyper, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny S Hotels & Resorts, dia nilaza hoe: “Faly izahay fa miara-miasa amin'ny Phuket Marine Biological Center amin'ity tetikasa goavana ity. Ny antsantsa volotsangana dia sokajian'ny International Union for Conservation of Nature (IUCN) ho 'marefo', noho izany dia handray anjara lehibe amin'ny fiarovana ny karazana vato fototra ny fandaharan'asa SOS. Tafiditra ao anatin'ny fampanantenan'ny orinasanay ho an'ny planeta izany, izay tarihin'ny fanohanantsika ny tanjon'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana maharitra (SDGs), indrindra ny SDG14, 'Fiainana ambanin'ny rano', izay mifantoka amin'ny ranomasina, ranomasina ary renirano.
“Ny Foibem-pikarohana an-dranomasina ao amin'ny Village Village SAii Phi Phi sy SAii Lagoon Maldives dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana anaty rano sy ny fiarovana ny bibidia. Notarihin'ny biolojista an-dranomasina mponina, izy ireo koa dia mampianatra ny vahiny sy ny mponina eo an-toerana ao amin'ny vondrom-piarahamoninay momba ny maha-zava-dehibe ny fiarovana. Miandrandra ny fiaraha-miasa amin'ny namana sy mpiara-miasa aminay ao amin'ny PMBC izahay mba hamonjena ny antsantsa volotsangana any atsimon'i Thailand”, hoy ihany Andriamatoa De Cuyper.
Dr. Kongkiat Kittiwatanawong, Talen'ny Foibe Biolojika an-dranomasina Phuket, dia naneho hevitra hoe: “Ny foibenay dia matoky ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-manaon'ny Singha Estate amin'ny lafiny fiarovana ny zavamananaina an-dranomasina raha jerena ny traikefan'ny orinasa tamin'ireo tetikasa taloha. Ankoatra izany, nampiasa mpahay siansa sy mpiasa an-dranomasina maro tao amin'ny Marine Discovery Center ny orinasa, izay manana fahaiza-manao hikarakara ny atodin'ny antsantsa Bamboo mandra-pahatongany ho zaza tsy ampy taona.
S Hotels & Resorts sy Singha Estate dia niara-niasa tamin'ny hetsika fiarovana an-dranomasina nahomby. Ny tetikasa “Miova ny Phi Phi” dia mikendry ny hamaha ny olan'ny fanafoanana ny haran-dranomasina, raha ny “Toh Wai Wai” kosa dia manampy amin'ny famotsorana ny clownfish, manaparitaka haran-dranomasina ary mamboly hazo honko ao amin'ny valan-javaboary Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi. Ankoatra izany, ny fiaraha-miasa vaovao miaraka amin'ny Kasetsart University dia mampiasa drôna hanaraha-maso sy haka sary ny haran-dranomasina ao amin'ny faritra. Tany am-piandohan'ity taona ity, ny Ivotoeram-pahitana an-dranomasina ao amin'ny Tanànan'ny Nosy SAii Phi Phi dia namonjy sy nanarina antsantsa volotsangana sy liona iray naratra.
Tany Maldives, ny ezaka fanaparitahana haran-dranomasina nataon'ny ekipan'ny Marine Discovery Center ao amin'ny SAii Lagoon Maldives dia nitarika ho amin'ny fanitarana avo folo heny ny haran-dranomasina teo an-toerana, ary ny fiverenan'ny sokatra an-dranomasina, ny antsantsa scalloped hammerhead ary ny trondro tavoahangy amin'ny faritra. Nisy sokatra an-dranomasina Olive Ridley bevohoka koa hita nanatona teo amoron-dranomasina tamin'ny taona 2020 - ny voalohany voarakitra an-tsoratra momba an'io karazana akany any Maldives io.
Nanolo-tena ny S Hotels & Resorts hanafoana ny plastika ampiasaina tokana, hampihenana ny fako, fanodinana ny rano ary hanohana ny fampiasana vokatra maharitra sy azo simbaina. Miaraka amin'ny hetsika maro izay mitohy, dia tsy mahagaga raha nahazo loka maro ny vondrona, anisan'izany ny anaram-boninahitra "Green Leadership" tamin'ny Asia Responsible Enterprise Awards 2020. SAii Phi Phi Island Village no mpandresy "Marine & Nature" tao amin'ny Tourism Authority. of Thailand (TAT) UK Responsible Thailand Awards 2020, raha i Santiburi Koh Samui kosa dia nahazo ny "Gold Level" an'ny Green Hotel Award 2020 – 2021 – hany toeram-pialofana any Samui nahatratra io haavo io tamin'ireo trano 100 mahery nampiharina.